Mkpụrụ osisi edo edo mara mma nwere hematite bụ gemstone dị obere - vidiyo
Zụta okike ọla edo edo emere na hematite na ụlọ ahịa anyị
Mkpụrụ osisi hematite na-acha edo edo na-acha uhie uhie bụ hematite dị obere. A na-ahụ Rutile na hematite na quartz dị iche iche, mana ọ naghị adịkarị otu.
Goolu edo edo mara mma
Mkpụrụ osisi nke quartz edo edo edo edo edo edo edo edo edo dị iche iche nke nwere obere agịga dị ka agịga nke rutile. A na-eji ya maka gemstones. Nleta ndị a na-eyikarị ọla edo, mana ha nwekwara ike ịlele ọla ọcha, ọla kọpa uhie ma ọ bụ nke ojii. Enwere ike ekesa ha na mbu ma ọ bụ na ngwugwu, nke a na-ahazi ka kpakpando dị ka oge ụfọdụ, ha nwekwara ike ịgbawa agba ma ọ bụ buru oke ibu iji mee ka ahụ quartz bụrụ ihe na-adịghị mma. Ọ bụ ezie na inclusions ọzọ na-ebelata uru nke kristal, a na-eji quartz ritized emezi emezi maka mma na ịma mma nke nsị ndị a.
Hematite, nke akpọkwara ka haematite, bụ ihe igwe eji agbaze igwe na - usoro nke Fe2O3 ma gbasaa na nkume na ala. Hematite na-etolite n'ụdị kristal site na sistemụ lattice rhombohedral, ọ nwere otu kristal ahụ dị ka ilmenite na corundum. Hematite na ilmenite na-etolite ngwọta zuru oke na ọnọdụ okpomọkụ karịa 950 Celsius.
Hematite nwere agba ojii na agba nchara ma ọ bụ ọla ọcha-agba ntụ, aja aja na agba aja aja, ma ọ bụ ọbara ọbara. A na-egwute ya dị ka nnukwu mmanụ. Uzo di iche-iche tinyere mmanu akụrụ, martite, iron rose na specularite. Ọ bụ ezie na ụdị ndị a dịgasị iche, ha niile nwere ajị-acha ọbara ọbara na-acha ọbara ọbara. Hematite siri ike karịa nchara dị ọcha, mana ọtụtụ na-emebi emebi. Maghemite bụ hematite na magnetite metụtara oxide.
Mkpụrụ osisi edo edo edo edo edo edo edo edo edo edo edo edo dị anya ụdị ọla dị iche iche nke quartz bụ amplifiers siri ike, Rutile bụkwa ihe dị ike.
Ike dị egwu nke eri nke rutile ga-eweta site n'ike dị egwu, yana ijikọ ya na quartz na -eme mkpọtụ dị ịtụnanya. Usoro a nwere ike ịkwalite okike ime mmụọ gị, yana ike gị igosipụta ihe ị chọrọ na ndụ gị, site n'ike nke ebumnuche.
Gootu mara mma nke edo edo na hematite, sitere na Brazil